Visa e-Tourista 5 taona | Visa an-tserasera India
Visa e-Tourista 5 taona
Ireo teratany vahiny maniry ny hitsidika an'i India hizaha fitsangatsanganana na fialam-boly, fitsidihana an-tsitrapo hihaona amin'ny namana sy ny fianakaviana na programa yoga amin'ny fotoana fohy dia afaka mangataka visa e-Tourista any India 5 taona.
Nanova ny politikan'ny Visa e-Tourist Visa ny Sampan-draharahan'ny Fifindra-monina Indiana nanomboka tamin'ny Septambra 2019. Mba hahatanteraka ny vinan'ny praiminisitra Narendra Modi amin'ny fampiakarana avo roa heny ny isan'ny mpizahatany tonga any India, na ao an-toerana na any ivelany ao anatin'ny 5 taona, dia nanambara ny minisitry ny fizahantany Prahlad Singh Patel. fiovaovan'ny fanovana amin'ny Indian Online Visa. Nanamafy izany ny minisitra mila manova ny fomba fahitan'ny mpizahatany vahiny tonga any India isika ary hiasa miaraka amin'izany.
Ka manomboka amin'ny volana septambra 2019 izao dia misy Visa turista 5 taona maharitra (India e-Visa) maharitra ho an'ny mpizahatany vahiny maniry ny hitsidika an'i India imbetsaka ao anatin'ny 5 taona.
Misy Visa e-Tourista ankehitriny amin'ny sokajy manaraka:
e-Tourista Visa 30 andro: Ny visa fidirana indroa manan-kery mandritra ny 30 andro manomboka amin'ny daty nidirana ao India.
visa e-mpizahatany mandritra ny 1 taona (na 365 andro): Visa fidirana marobe marimaritra iraisana mandritra ny 365 andro manomboka amin'ny vanim-potoana fanomezana e-Visa.
visa e-mpizahatany mandritra ny 5 taona (na 60 volana): Visa fidirana marobe marim-pototra mandritra ny 5 taona manomboka ny vanim-potoana fanomezana e-Visa.
Ny visa rehetra voalaza etsy ambony dia tsy azo ovaina sy tsy azo ovaina. Raha nanao fangatahana sy nandoa Visa Turista 1 taona ianao dia tsy azonao atao ny manova na manatsara izany ho visa 5 taona.
Fampandrenesana Visa mijanona mandritra ny 5 taona an'ny mpizahatany
Mijanona maharitra mandritra ny tsirairay ny fitsidihana dia tsy tokony hihoatra ny 90 andro ho an'ny zom-pirenena, afa-tsy ny olom-pirenena USA, UK, Canada ary Japon.
Ho an'ireo manana pasipaoro Etazonia, UK, Canada ary Japon ny fijanonana maharitra mandritra ny fidirana tsirairay dia tsy tokony hihoatra ny 180 andro.
Ny visa e-Tourista 5 taona dia matetika no avoaka miaraka amin'ny 96 ora. Na izany aza, tsara ny mampihatra 7 andro mialoha ny sidinao.
Mangataha Visa Indian Tourist
Ahoana no azo ampiasana ny visa e-Tourista 5 taona?
Visa e-tourist India dia omena ireo izay mikasa ny handeha any India noho ny antony iray na maromaro amin'ireto antony manaraka ireto:
Ny fitsangatsanganana dia natao ho an'ny fialamboly na fitsangatsanganana
Ny dia dia fitsidihana namana, fianakaviana na havana mitsidika
Ny fitsangatsanganana dia ny fanatrehana programa yoga mandritra ny fotoana fohy
Vakio bebe kokoa momba izany Ilay e-Visa mpizahatany ho any India
Inona avy ireo fepetra ilaina mba hahazoana visa e-Tourista 5 taona?
Ny fepetra ilaina amin'ny visa e-Tourist India 5 taona dia:
Pasipaoro izay manan-kery mandritra ny 6 volana farafahakeliny hatramin'ny andro nahatongavany voalohany tany India.
ID amin'ny mailaka.
Fomba mety amin'ny fandoavam-bola toy ny carte debit / carte de crédit (Visa, MasterCard, Amex sns), UnionPay na kaonty Paypal.